Ny Fomba Hivazivaziana Ao Amerika Miaraka Amin’i Trump · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2017 2:56 GMT
Nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 1 Febroary 2017 ity tantara avy amin'i Sarah Birnbaum ity. Dika somary nasiana fanovàna kely no navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fiarahana miasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Tamin'ny Desambra 2015 i Kondabolu no namboraka voalohany ny tetikadiny, fotoana ela talohan'ny nahalàny an'i Trump, saingy taorian'ny niantsoan'ity mpirotsaka hofidiana ho filoha tamin'izany fotoana izany ity “fampiatoana tanteraka sy manontolo ny fidiran'ireo Miozolmana tsy ho any Etazonia.” Ny 27 Janoary 2017, i Trump efa filoha no nanasonia didim-panjakàna mandràra ireo teratany avy aminà firenena fito be vahoaka Miozolmana — Iràna, Iràka, Libia, Somalia, Sodàna, Siria ary Yemen — tsy hiditra ny firenena mandritry ny 90 andro, hatramin'ny fampiatoana mandritra ny fotoana tsy voafetra ilay fandaharanasa momba ireo Siriana mpitsoaponenana.
Miatrika fanamby hafa ireo mpanao hatsikana tato ho ato : Mizarazara be ny mpihaino. Taminà fampisehoana hatsikana iray natao tany Boston tamin'ny Novambra, nihorakorahan'ny olona i Wanda Sykes taorian'ny nitantaràny teny an-tsehatra vazivazy mamely an'i Donald Trump.
Mpanao hatsikana iray mitondra ny hatsikany ho azo jifaina i Aziz Ansari. Lazain'i Kondabolu fa nijery ny resaka tsy valiana nataon'ì Ansari tao anatin'ny fandaharana “Saturday Night Live” mandeha amin'ny TV izy.
Mamindra am-pitandremana i Ansari ao anatin'ny fahazaran'ny fandaharana SNL. Etsy andaniny, tsindroniny ireo mpomba an'i Trump. Ampitahainy amin'ireo mpankafy ilay amerikàna mpanakanto mpiangaly hip-hop, Chris Brown, izay tia ny mozikan'i Brown saingy tsy manohana kosa ireo “zavatra hafa ataony ivelan'izay” (anatin'ireo olany hafa manoloana ny lalàna, tamin'ny 2009 i Brown dia niaiky fa meloka tamin'ny herisetra nataony tamin'ny sakaizany tamin'izany fotoana izany, i Rihanna mpihira). Nefa ezahan'i Ansari ihany koa ny hanolo-tànana sy hampitandrina ireo Amerikàna mba ho ‘mailo tsara’. Tsy azontsika antsoina hoe demony ireo olona rehetra nifidy an'i Trump.”